Erdogan oo shaaciyey 4 dal oo Carabeed oo qeyb ka ah shirqool ka dhan ah Qudus – Hornafrik Media Network
Erdogan oo shaaciyey 4 dal oo Carabeed oo qeyb ka ah shirqool ka dhan ah Qudus
By Liibaan Nuur	 Last updated Feb 1, 2020
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey qaar ka mid ah dalalka Carabta inay taageerayaan qorshaha Bariga Dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweyne Donald Trump, taasi oo uu ku qeexay “Khiyaano Qaran.”
“Qaar ka mid ah dalalka Carabta ee taageeraya qorshaha noocan ah waxay sameynayaan Khiyaano Qaran oo ka dhan ah Qudus, shacabkooda iyo guud ahaan bani’aadannimada” ayuu Erdogan u sheegay madax goboleedyada xisbigiisa oo uu kula kulmay Ankara.
Erdogan oo ah hoggaamiye diinta ku adag, una ololeeya xuquuqda Falastiin, ayaa si gaar ah u magacaabay Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxreyn iyo Jordan.
“Gaar ahaan Sacuudi Carabiya, waad aamusan tihiin, goorma ayaad hadli doontaan? Waxaad eegtaa Jordan, Baxreyn iyo Imaaraadka, ayagana waa la mid,” ayuu yiri.
“Ceeb ha idinku dhacdo, sidee gacmaha u sacbinaya qorshahan ay u taageeri karaan?” ayuu yiri Erdogan.
Qorshaha Trump ee nabadeynta Israel iyo Falastiin oo loogu magac daray “Heshiiska Qarniga” ayaa Qudus u aqoonsanaya caasimadda aan la kala qeybin ee Israel.
Qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada Yahuudda ee Daanta Galbeed ay kusii jaraan gacanta Israel.
Dowladda Sacuudiga ayaa horey madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas ugu yaboohday 10 bilyan oo dollar si uu aqbalo qorshaha Mareykanka ee loogu magac daray “heshiiska qarniga”, kaasi oo si rasmi ah magaalada Qudus ku wareejinaya Yahuudda.
Dadaalo lagu xakameynayo caabuqa Coronovirus oo ka socda Dunida oo dhan
Wasiir Goodax oo ku adkeystay mowqifkii DF ee shahaadada ardayda Puntland, weerar afka ahna ku qaaday Faroole